Muran Kataagan Hab qeybsiga Guddiga Farsamada Maamul u Sameynta Gobalada Hiiraan iyo Sh/Dhexe – STAR FM SOMALIA
Muran Kataagan Hab qeybsiga Guddiga Farsamada Maamul u Sameynta Gobalada Hiiraan iyo Sh/Dhexe
Inkastoo uu dib u dhac ku yimid ku dhawaaqistii Guddiga farsamada oo qorshuhu ahaa in 15-kii bishan la magacaabo ayaa waxaa la sheegayaa in caqabado dhowr ah ay ka hor yimaadeen.
Warar ay heleyso Jowhar.com ayaa sheegaya in wali la isku haayo habka loo qeybsanayo Guddiga farsamada oo ka kooban 31 xubnood, waxaana wali la isla meel dhigin sida loo qeybsanayo.
Labo aragti oo kala ahaa in xubnaha Guddiga farsamada labo gobol loo kala qeybsado iyo in beelaha kala qeybsadaan ayaa ah mid uu ka taagan is mari waa, laguna kala aragti duwanaaday, kadib markii beelo qaar ay ka keeneen saluug ku aadan inuu dhaco sad-buris.
Shirka ayaa la sheegay in habeen hore lagu kala kacay, markii la isku mari waayay habka loo qeybsanayo Guddiga farsamada, hase ahaatee waxaa xalay dib la isugu soo laabtay shirka, waxaana wararku sheegayaan in markii hore qeyb ahaan la isku afgartay, hadana beelaha qaar ay saluug ka keeneen sida loo qeybsanayo Guddiga farsamada.
Wasaaradda ayaa la sheegay inay dooneyso in si dhex dhexaad ah ay u dhacdo howsha Guddiga farsamada, si aanay hadhow isu qorin xubnaha Guddiga marka ay timaado soo xulista Xildhibaanada.
Dad badan oo taxliiliya arrimaha siyaasada ayaa aaminsan inuu dib u dhac ku imaan karo jadwalkii maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, maadaama bilowga hore ee howsha ay caqabado ka hor yimaadeen.
Sahro Maxamed Cali Samatar “Sharciga Gudniinka fircooniga Waa lameel Marinayaa” (Daawo Sawirada)
Waa Maxay Sababta Luugu Diiday Cali Ameeriko in uu Mudaha ugalo Magaalada Baladweyne